Fandevenana mpanakanto :: Henin-kaja amam-boninahitra ny fanaovam-beloma farany an’i Dadah • AoRaha
Fandevenana mpanakanto Henin-kaja amam-boninahitra ny fanaovam-beloma farany an’i Dadah
Tontosa omaly ny fotoam-pandevenana an’Andrianabela Rakotobe na I dadah, mpikambana ao amin’ny tarika Mahaleo. Endrika malahelo sy fo mavesatra no nameno ny tontolo andro, nanomboka tamin’ny fiaingan’ny tranovorona tetsy Mahamasina, namakivaky ny lalam-pirenena fahafito hatrany amin’ny fasana, any Betafo Antsirabe.
Vita omaly tolakandro tany amin’ny fasan-drazany any Betafo Antsirabe ny fanitrihana ny nofo mangatsiakan’Andrianabela Rakotobe na i Dadah, kalazalahy amin’ny famoronan-kira ao amin’ny tarika Mahaleo. Tsy maty fa velona ao am-pon’ny rehetra ny fankafizana ny feo mangany. Nanomboka tamin’ny naharenesana ny fahalasanan’ity andrarezin’ny vazo an-gitara ity, tamin’ny alahady 3 novambra 2019 teo, dia sesilany ny fanehoan-kevitra momba azy amin’ireo fampahalalam-baovao samihafa.
Kopa-tanana, fialan-tsatroka, fiondrehana am-panajana no nandraisan’ny mponina teny amin’ireo toerana rehetra nolalovan’ny razana omaly, niainga tao amin’ny lapan’ny Fanantanjahantena Mahamasina, nihazo ny fiangonana FJKM Katedraly Analakely, namakivaky ny lalam-pirenena fahafito (RN7), nigadona tao Antsirabe ka hatrany Betafo nanaovana ny fotoam-pandevenana. Lavitra ny lalana ka tany amin’ny 5 ora hariva mahery tany vao nasitrika tao am-pasana ny razana.
Fiaretan-tory feno fihetseham-po
Mampihetsi-po ny fitiavan’ny olona an-dry Mahaleo. Feno hipoka ny lapan’ny Fanatanjahantena sy Kolontsaina Mahamasina, tamin’ny alarobia alina teo, raha hanao veloma farany an’i Dadah. Tsikaritra teny amin’ny endriky ny tsirairay ilay fihetseham-po maneho alahelo, mitory fiaraha-mizaka ny fahoriana.
Nisesy ny famangiana sy firarian-tsoa nataon’ireo mpanakanto sy olon-tsotra. Nitomany i Bekoto, gina i Dama. Hita fa vonton’alahelo i Charles. Nitanondrika ny fianakaviana. Nitohy tamin’ny fiaretan-tory ny fandaharam-potoana ny alina manontolo. Nifandimby niaka-tsehatra ireo artista maro tonga nanotrona teny an-toerana.
Anisan’ny nandona fo ny iray efitrano ny nive-tsoan’i Tolotra sy Ony ny «Hanaraka anao», noravahan’ny angolam-peon’ny vata maroafitsoka notendren’i Bekoto sady nohaingoin’ny rotsin-gitaran’i Dama ary ny dobok’ampongan’i Charles… Tehaka sy hoby maredona no setrin’izany avy amin’ny fianakaviana sy ny mpanatrika. Toa hoe faly kanefa manganohano ny
Amin’ny maha mpanan-talenta tsy zoviana amin’ny maro an’i Dadah dia tsy nitazam-potsiny ny maha izy azy ny fitondram-panjakana. Notolorana ny mari-pankasitrahana « Grand Officier de l’Ordre National » ity mpanakanto ity, omaly maraina. Ny Praiminisitra Ntsay Christian notronin’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta no nanolotra izany. Nisy ny fampaherezana nataon’ny Fitondrana ny fianakavian’ny mana-manjo, noho izao fahalasanan’i Dadah izao.
Nanolotra fisaorana ny Fitondram-panjakana, ny vahoaka malagasy, ireo mpanakanto maro sy mpankafy an’i Dadah ny solontenam-pianakaviana tamin’ny fotoana nanaovam-belona farany azy tetsy Mahamasina.
Tsiky tao am-piangonana
Rehefa tena hanainga hihazo ny fiangonana FJKM Katedraly Analakely ny razana, no nitsangana tahaka ny mpanatrika iray ireo olona marobe. Nentanim-po nitehaka ny rehetra. Nanomboka hatramin’ny fivoahan’ny tranovorona ny lapan’ny Fanatanjahantena sy Kolontsaina Mahamasina hatreny an-dalambe rehetra teny dia nampihetsi-po avokoa ny fihetsiky ny olona. Nanofahofa tanana avokoa ny tao anatin’ny lapa. Nanao toy izany teny ivelany.
Niavaka tsy toy ny mahazatra ny toriteny nataon’ny mpitandrina Dina Razafimamonjy nampaherezana ny fianakaviana tao am-piangonana. Niavaka satria natamberiny tao avokoa ireo hanihany sy vazivazy fanaon’i Dadah. Nisy fotoana ny mpitandrina no nanao ilay fiteny sy fihomehezana mampiavaka an’ity mpanakanto ity, ka nampitsiky ny iray fiangonana.
Naverimberina tamin’ny lahateny nataony ny tsianjery nahafinaritra an’i Dadah, fony fahavelony, manao hoe “Zava-tokana no ilaina, ho an’ny olona misaina, dia fitiavana zaraina”. Olona maro ihany koa no niandry an’i Dadah teo am-pivoahana ny fiangonana tetsy Analakely.
Fanatsarana ny fanabeazana :: Nandray mpampianatra telo amby roapolo ho lasa mpiasam-panjakana ny Filoha